पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाउने तयारी | प्रहर खबर
२०७९ जेठ १३, शुक्रबार १४:१२ बजे
काठमाडौं – सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हटाउने तयारी गरेको छ । रुस र युक्रेनबीचको सङ्घर्षको बाछिटा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्दा इन्धनको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएपछि सरकारले आन्तरिक बजारमा परेको चापलाई कम गर्न पूर्वाधार कर हटाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १० गतेको बैठकले कर समायोजन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको आज शुक्रवारको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर समायोजन गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् ।
अघिल्लो सरकारले पूर्वाधारको विकासमा जोड दिने भन्दै इन्धनमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बराबरको कर उठाउने निर्णय गरेको थियो । सुरुमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि भनेर प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले कर उठाइएको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयअनुसार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूर्वाधारको विकासका लागि प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ थप कर उठाउने निर्णय भएको थियो ।
बूढीगण्डकीको नाममा मात्रै सरकारले ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सङ्कलन गरिसकेको छ । पूर्वाधार करका नाममा उठेको रकम सोझै सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुने गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले कर समायोजनका सम्बन्धमा निर्णय गरेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले त्यस सम्बन्धमा विचार गरिरहेको समेत मन्त्री बडूको भनाइ छ । नेपाल आयल निगमले अहिले पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ८० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ ।
लगातार मूल्यवृद्धि भएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । मन्त्री बडूले भने आन्तरिक कारणले नभइ अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको जानकारी दिए । सरकारको पछिल्लो निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले उपयुक्त निर्णय गर्ने जनाएको छ ।
निगमका अनुसार अहिले पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर एक सय ९४ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । निगमले अहिले तय गरेको मूल्यका आधारमा पेट्रोलमा नै प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा घाटा रहेको छ । निगमले १५ दिनमा मात्रै पेट्रोल बिक्रीबाट ४९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको घाटा हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
त्यस्तै डिजलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर एक सय ८९ रुपैयाँ ८२ पैसा रहेको छ । निगमले प्रतिलिटर एक सय ६३ मा बिक्री गर्दै आएको छ । डिजलबाट मात्रै १५ दिनमा एक अर्ब ६९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको घाटा हुने गरेको छ । मट्टीतेलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर एक सय ४० रुपैयाँ ८९ पैसा रहेको छ तर निगमले मट्टीतेल भने एक सय ६३ रुपैयाँमा नै बिक्री गर्दै आएको छ । त्यसमा भने प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ ११ पैसा नाफा छ । निगमले १५ दिनमा एक करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको नाफा गर्ने गरेको छ ।
हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फको खरिद मूल्य प्रतिलिटर एक सय ५२ रुपैयाँ दुई पैसा छ । निगमले प्रतिलिटर एक सय ६६ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । यसबाट १५ दिनमा तीन करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको नाफा हुने गरेको छ । हवाई इन्धन बाह्यको खरिद मूल्य प्रतिलिटर एक सय ३१ रुपैयाँ १९ पैसा छ । निगमले हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर ५९ रुपैयाँ ८१ पैसा नाफा गरेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर एक हजार आठ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । प्रतिसिलिन्डर लागत दुई हजार ६ सय ७९ रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको छ । निगमलाई ग्यासबाट मात्रै आठ सय ७९ रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा छ ।
निमगलाई १५ दिनमा तीन अर्ब ३५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको घाटा हुने गरेको छ । निगमलाई ग्यासमा मात्रै एक महिनामा तीन अर्ब, डिजलमा तीन अर्ब ४० करोड र पेट्रोलमा एक अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने सहप्रवक्ता पुस्कर कार्कीले जानकारी दिए । निगमले यही जेठ ८ गते मात्रै मूल्य समायोजन गरेको थियो ।
निगमले इन्डिन आइल कर्पोरेशन ९आईओसी० लाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेबापत मे महिनामा ४३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेमा २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्र पठाएको छ । बाँकी २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अहिले बक्यौता छ । निगमले सञ्चित मुनाफा, मूल्य स्थिरीकरण कोष तथा अन्य कोषमा रहेका सबै रकम सकिसकेको छ । निगमलाई यसबीचमा ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सान भइसकेको छ ।
यद्यपि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीयरूपमा सङ्कटग्रस्त सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः निजीकरण वा खारेज गर्ने उद्देश्य राखिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले० का नेता केपी शर्मा ओलीले बिहीवार संसदमा आपत्ति जनाएका थिए । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उद्योगमन्त्री बडूले हचुवाको भरमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले गलत मनसायका साथ त्यो धारणा राखेको भन्दै आपत्ति मात्रै जनाउनुभएन, त्यस्तो आरोप पुष्टि गर्नसमेत चुनौती दिए ।
बागमती प्रदेशको विनियोजन विधेयक स्वीकृत, मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल सुरु
‘लिफ्ट’ मागेर हातखुट्टा बाँधेर कुटपिट र लुटपाट, तीन जना पक्राउ
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दोस्रो वार्षिक उत्सवमा रक्तदान र बिरामीहरुलाई फलफुल वितरण
हेटौंडा उपमहानगरद्वारा प्लाष्टिक झोला प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता
मकवानपुरमा खैरो हेरोइनसहित ढकाल पक्राउ
कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि
स्नातक र स्नातकोत्तर तह पढ्ने विद्यार्थीले ९० दिन स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्ने
सुनचाँदी कतिमा कारोबार हुँदैछ ?
कूल गार्हस्थ्य उत्पादन: बागमती प्रदेशको हिस्सा एक तिहाइ बढी हुने अनुमान